purogiramu yehupfumi - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Kufanana nevanowanzoita webhusaiti, NYECountdown, llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), inounganidza ruzivo rwekusaziva pachako rwekushandurwa kwewebhu uye sevharesi zvinowanzoita kuti zviwanikwe, zvakadai sedudziro rekushandura, mutauro unofarira, kureva nzvimbo, uye zuva uye nguva yechikumbiro chemuenzi mumwe nomumwe. Chinangwa cheNYECOUNTDOWN, LLC chekunyora ruzivo rusingazivi iwe pachako ndechekunyatsonzwisisa kuti vatenzi veNYECOUNTDOWN, LLC vanoshandisa sei webhusaiti yavo. Nguva nenguva, NYECOUNTDOWN, LLC inogona kusunungura ruzivo rwusingazviiti pachako-rwekutsvaga, pamwe, nekudhinda mushumo pamusoro pemafambiro ekushandiswa kwewebsite yayo. NYECOUNTDOWN, LLC inogadzirawo ruzivo rwekutsvaga ruzivo rweIndaneti Protocol (IP) mazita ekupinda mukati mavanoshandisa uye kuvashandisi vanosiya mazwi pa WordPress.com mablog. NYECOUNTDOWN, LLC inongotsvaga yakapinda mukati memushandisi uye murondedzeri IP mazita pasi pemamiriro akafanana ayo anoshandisa uye inotsanangura ruzivo rwekutsvaga humwechete rwunotsanangurwa pasi apa, kunze kwekuti blog blog commenter IP addresses neamero e-mail inooneka uye inobudiswa kuvatongi veblogi apo mhinduro yakasara.
Kuunganidzwa kweZvo-Kuziva Mashoko
Vamwe vashanyi kumawebsite eNYECOUNTDOWN, LLC vanosarudza kuyanana naNYECOUNTDOWN, LLC nenzira dzinoda NYECOUNTDOWN, LLC kuunganidza ruzivo rwekuzviziva. Nhamba uye ruzivo rwehuwandu hwekuti NYECOUNTDOWN, LLC inounganidza inobva pane zvisizvo zvekubatana. Vanhu kana zvikamu zvingagona kukwanisa kutengesa neNYECOUNTDOWN, LLC vanobvunzwa kupa humwe ruzivo rwekuwedzera, kusanganisira sezvinodiwa ruzivo rwemunhu uye rwemari runodiwa kuti rushandise iyo kutengesa. Munyaya imwe neimwe, NYECOUNTDOWN, LLC inounganidza mashoko akadaro chete kana zvichidikanwa kana zvakakodzera kuzadzisa chinangwa chekubatana kwemuenzi naNYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC haina kuzarura ruzivo rwekuzvimirira humwe kunze kwekutsanangurwa pasi apa. Uye vashanyi vanogona kuramba kuramba vachipa ruzivo rwekuzvitsvaga, nevhavha iyo inogona kuvadzivisa kusaita mune mamwe mabasa ane chokuita newebsite. Zvichipa mhirizhonga yenyika yose yeWebsite yeOserators, ruzivo rwevanhu pachavo runogona kuonekwa kune vanhu vasiri kunze kwenyika yenyu yekugara, kusanganisira kune vanhu vari munyika iyo mitemo yenyu yega yega yega uye mitemo inofanirwa kushaya kukwana pakugadzirisa zvakakwana kudzivirirwa kwemashoko akadaro. Kana iwe usina chokwadi kana iyi Inyo yePamusoro inopesana nemitemo inoshanda yemo, haufaniri kutumira mashoko ako. Kana iwe uri mukati meEuropean Union, iwe unofanira kuona kuti ruzivo rwako ruchaendeswa kuUnited States, rinoonekwa neEuropean Union kuti irege kuchengetedzwa kwemashoko. Kunyange zvakadaro, maererano nemitemo yemunharaunda inoshandisa European Union Directive 95 / 46 / EC ye24 October 1995 ("EU Privacy Directive") pakudzivirirwa kwevanhu pamusoro pekugadziriswa kwedunhu rega uye nekusununguka kwemashoko akadaro, vanhu iri mune dzimwe nyika kunze kweUnited States of America iyo inotumira ruzivo rwevanhu pachavo inobvumirana nekushandiswa kwemashoko akadai sekupiwa kweNyaya yeChinyorwa Chekuita uye kubhadhara kwayo uye / kana kuchengetwa muUnited States of America.
Vanyoresa vanokurudzirwa, asi hazvidikanwi, kuti vawane ruzivo pamusoro pavo, izvo zvinogona kuratidzirwa nekambani yavo. Parizvino, isu ticharatidza chete mukati meKubhadharira yedu yekutengesa, yako "Zita rekudanwa" uye guta raunenge uri. Kana iwe usingadi kuti nzvimbo yako yeruzivo uratidze, usapinda mauri paunopedza fomu yako yekunyora yeruzivo.
NYECOUNTDOWN, LLC yakagadzirirwa kuchengetedza ruzivo rwevana, kunyanya avo vari pasi pe13. Sezvo NYECOUNTDOWN yakadaro, LLC inokurudzira vabereki nevatarisi kuti vabatanidzwe nevana vavo kana vana vekutsvaga nekutsvaga paIndaneti. NYECOUNTDOWN, LLC haisi kuunganidza zvinangwa kubva kuvana. Uyezve, NYECOUNTDOWN, LLC haina kutsvaga Site yayo kune vana.
Zvisungo kune Vasiri Vashandi Web Sites
Iyo Site inogona kusanganisira mazano kune mamwe mawebsite kana nzvimbo dzimwe dzingashandiswa neNYECOUNTDOWN, LLC kana vayambani varo, nevamwe vanobatwa nevechitatu. Izvi zvinongobatsira chete. Hatina kuongorora ruzivo pane dzimwe nzvimbo. Isu hatisi mhaka yezvimwe zveimwe zvivako kana zvimwe zvigadzirwa kana mavhisi anogona kugoverwa kuburikidza nedzimwe nzvimbo. Nokudaro, unofanira kungwarira paunenge uchishandisa mamwe mawebsite, sezvaunoita iwe pachako pangozi. NYECOUNTDOWN, LLC inokukurudzira kuti uongorore purogiramu yega yega yebhundaneti usati waisa ruzivo rwemunhu.
NYECOUNTDOWN, LLC inoshandisa PayPal, Inc. semupiro wekodzero yevhisi yekwereti. NYECOUNTDOWN, LLC haina kuchengeta panguva ipi zvayo, chero ruzivo rwekwereti kutenga kana kuchengetedza kubhadhara kuHurumende. Sezvo zvakadaro, NYECOUNTDOWN, LLC inorambidza zvose zvinotarisirwa nekodzero yemarikiti.
NYECOUNTDOWN, LLC inoshandisa Google Analytics kuti iwane ruzivo rwemashoko kubva kumashandisi aro uye inogona kuunganidza nhamba pamusoro pekuita kwevashanyi kune mawebsite. NYECOUNTDOWN, LLC ingaratidza ruzivo urwu pachena kana kupa kune vamwe. Zvisinei, NYECOUNTDOWN, LLC haina kuzarura ruzivo rwehumwe-ruzivo kunze kwekutsanangurwa pasi apa.
Kudzivirirwa Kwezvimwe Munhu-Kuziva Mashoko
NYECOUNTDOWN, LLC inotsanangura zvingangove-kuzivisa uye pachedu-kuzivisa ruzivo chete kune avo vashandi varo, makontrakta uye masangano anobatana anoti:
• vanoda kuziva iyo ruzivo kuitira kuti rushandure paNYECOUNTDOWN, LLC kana kuti kupa hutano hunowanikwa paWewe POUNTDOWN, LLC, uye
• vakabvumirana kuti vasati vauudze vamwe.
Vamwe vevashandi ivavo, makontrakiti uye masangano anobatana angave ari kunze kwenyika yekumba kwako; kuburikidza nekushandisa mawebsite eNYECOUNTDOWN, LLC, unobvuma kutumira mashoko akadaro kwavari. NYECOUNTDOWN, LLC haigoni kubvarura kana kutengesa zvingangove-kuzivisa uye kuziva-pachavo ruzivo kune ani zvake. Zvimwe kune vashandi vayo, makambaniki uye masangano akabatanidzwa, sezvakataurwa pamusoro apa, NYECOUNTDOWN, LLC inotsanangura ruzivo rwekuzvitsvaga-ruzivo uye ruzivo rwega pachavo chete maererano ne subpoena, chirongwa chemudare kana zvimwe zvikumbiro zvehurumende, kana kuti NYECOUNTDOWN, LLC inotenda mune zvakanaka kutenda kuti kuzivisa kunonyatsodiwa kuchengetedza dzimba kana kodzero dzeNYECOUNTDOWN, LLC, vanhu vatatu kana vanhu vakawanda. Kana iwe uri munyori wakanyoresa weNYECOUNTDOWN, LLC webhusaiti uye wapa email yako, NYECOUNTDOWN, LLC ingangokutumira dzimwe nguva email kuti ikuudze nezvezvinhu zvitsva, kumbira mhinduro yako, kana kungokuchengetedza pane zvinoitika pamwe neNYECOUNTDOWN, LLC uye zvigadzirwa zvedu. Isu tinoshandisa zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana-siyana kuti tikurukure rudzi urwu rwemashoko, saka tinotarisira kuchengetedza rudzi urwu rwemaminiti kusvika zvishoma. Kana iwe utitumira chikumbiro (somuenzaniso kuburikidza ne email inotsigira kana imwe yemitemo yemhinduro dzedu), tinochengetedza kodzero yekuibudisa kuitira kuti tibatsire kutsanangura kana kupindura chikumbiro chako kana kutibatsira kutsigira vamwe vashandisi. NYECOUNTDOWN, LLC inotora matanho ose anonyatsodiwa kudzivirira kusabvumirwa kusina kubvumirwa, kushandiswa, kuchinja kana kuparadzwa kwezvingave zviripo-kuzivisa uye pachedu-kuzivisa ruzivo.
Cookies uye Usateerere Zvaunokumbira
A cookie urongwa hwehuwandu hwekuti webhusaiti inochengetedza kakombiyuta yevakashanyi, uye kuti mushanyi wevashanyi anopa webhusaiti nguva dzose apo muenzi anodzoka. NYECOUNTDOWN, LLC inoshandisa makiki kubatsira NYECOUNTDOWN, LLC kuziva uye kutarisa vatenzi, kushandiswa kwavo kwewebsite yeNYECOUNTDOWN, LLC, uye zvido zvekutsvaga kwewebsite. NYECOUNTDOWN, LLC vanogara vasingadi kuve makiki akaiswa pamakombiyuta avo vanofanira kuisa ma browsers avo kuti varambe maokie vasati vashandura maZwe eNYECOUNTDOWN, LLC, uye kukanganiswa kwekuti zvimwe zviitiko zveWebsite dzeNYECOUNTDOWN, LLC hazvigone kushanda zvakanaka pasina kubatsira kwekiki. NYECOUNTDOWN, LLC ichaita / haichazoremekedzi haisi mapepa ekumbira.
Kana NYECOUNTDOWN, LLC, kana zvizhinji zvezvinhu zvayo, yakawanikwa, kana muitiko zvisingaiti kuti NYECOUNTDOWN, LLC inopinda mubhizinesi kana kupinda mubhadhadziro, ruzivo rwevachashandisa ruve rumwe rwezvinhu zvinotamirwa kana kuti zvinowanikwa nevechitatu. Iwe unobvuma kuti kuendeswa kwakadaro kunogona kuitika, uye kuti chero munhu anowana weNYECOUNTDOWN, LLC angaramba achishandisa mashoko ako ega ega akaiswa mumutemo uyu.
Zvitsva zvinowanikwa pane chero mawebsite edu zvinogona kutumirwa kuvashandisi nekutengesa shamwari, vanogona kuisa makiki. Aya makirogi anobvumira sevhareji yekutambira kuti aone kombiyuta yako nguva dzose pavanokutumira kushambadzira paIndaneti kuunganidza mashoko pamusoro pako kana vamwe vanoshandisa kombiyuta yako. Aya ruzivo anobvumira matanho ekutumira kune, pakati pezvimwe zvinhu, kutumira zviyeuchidzo zvakananga zvavanotenda kuti zvichava nehanya newe. Iyi Inyoyo yeMutemo inoshandisa kushandiswa kwekiki neNYECOUNTDOWN, LLC uye haifaniri kushandiswa kwekiki nevanoshambadziri.
Dzimwe nguva, NYECOUNTDOWN, LLC inogona kukuendesa email, mabhuku, magwaro (sms) ongororo kana mamwe mashoko, kana kuti kutaurirana newe nenzira inotsvaga. Kana ukasada kugamuchira chero ipi zvayo kana zvose zvekukurukurirana, unogona kusarudza nekutevera mazano anowanikwa mukati memagetsi epa newsletters uye zviziviso, kana kutumira email ku support@nyecountdown.com inoratidza chido chako chekubviswa pane chero ruzivo kana kuti deta yako yakabviswa kubva kuNYECOUNTDOWN, LLC. Nyora (sms) opt-outs, ingopindura ne "REMOVE".
Kunyange zvazvo kuchinja kwakawanda kungangove kwakangoita, NYECOUNTDOWN, LLC ingashandura iyo Purogiramu Yechirangaridzo nguva nenguva, uye muNYECOUNTDOWN, LLC chete. NYECOUNTDOWN, LLC inokurudzira vashanyi kuti vaongorore peji ino kune chero shanduko kuChinyorwa Chayo Chekuita. Kuenderera mberi kwekushandiswa kweSite iri mushure mekunge kushanduka kupi kweChirongwa cheChinyorwa Chedu kuchaita kubvuma kwako kwekuchinja kwakadaro.
Kuzvidzivirira uye Kurambidzwa kweMhosva
Iyi purogiramu yepachivande ichatungamirirwa nekudzivisa kwakafanana nekukanganiswa kwemhosva sezvinowanikwa muNYECOUNTDOWN, LLC Mitemo yeKushandisa maererano nekushandisa uye pamwe nekubvumirwa nemutemo.
Dare Rinodzora uye Nzvimbo Isingawaniki
Iyi purogiramu yepachivande ichatungamirirwa neMutemo iwoyo wekutonga uye Inzvimbo Yakasanganiswa yakawanikwa muNYECOUNTDOWN, LLC Mitemo yekushandisa maererano nemashoko aya anoshandiswa uye maererano nekubvumirwa nemutemo.